လမ်း၊ တံတားကြေးများကို သတ်မှတ်နှုန်းအတိုင်း ကောက်ခံကြရန် တာဝန်ရှိသူပြောကြား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » လမ်း၊ တံတားကြေးများကို သတ်မှတ်နှုန်းအတိုင်း ကောက်ခံကြရန် တာဝန်ရှိသူပြောကြား
လမ်း၊ တံတားကြေးများကို သတ်မှတ်နှုန်းအတိုင်း ကောက်ခံကြရန် တာဝန်ရှိသူပြောကြား
Posted by kln on Jun 3, 2010 in Other - Non Channelized |3comments
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိလမ်းများထဲမှ B.O.T (Build, Operate, Transfer ) စနစ်ဖြင့် လမ်းများကို တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေသော ကုမ္ပဏီများက လမ်း၊ တံတားအသုံးပြုခများကို နိုင်ငံတော်မှ သတ်မှတ်ပေးထားသော နှုန်းထားများနှင့်အညီ ကောက်ခံရန်နှင့် ပိုမကောက်ကြရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ တာဝန်ရှိသူက မှာကြားထားကြောင်း B.O.T စနစ်ဖြင့် လမ်း၊ တံတားဆောက်လုပ်ခွင့် ရထားသော ကုမ္ပဏီအချို့မှ တာဝန်ရှိသူများကပြောသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝန်း၌ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင် လမ်းမိုင်အရှည် ၂၁၃၆၁ မိုင် ၂ ဖာလုံရှိပြီး၊ ထိုလမ်းများထဲမှ ပုဂ္ဂလိကဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီ ၃၃ခုကို လမ်းပေါင်း ၇၉လမ်း (လမ်းမိုင်အရှည် ၄၇၆၇ မိုင်၊ ၆ဖာလုံ)အား B.O.T စနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားကြောင်း သိရသည်။ “ B.O.T ကို ပြုပြင်ဖောက်လုပ်၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရေး၊ လွှဲပြောင်းပေးရေးလို့ မြန်မာပြန်တယ်။ ပြုပြင်ဖောက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကို အများဆုံး ၃နှစ်၊ ကုမ္ပဏီက လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရေးကို နှစ် ၄၀ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရတယ်။ အရင်ကတော့ နှစ် ၃၀ ပဲပေးခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း ကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကတော့ နှစ် ၄၀ ကြီးပဲရတာ။ ပြီးရင်တော့ အစိုးရကို ပြန်လွှဲပြောင်းပေးရမှာပေါ့ ” ဟု လမ်းပိုင်းလေးခုကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားသော ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။ အဆိုပါစနစ်ဖြင့် လမ်း၊ တံတား ပြုပြင်ခွင့်ရသော ကုမ္ပဏီများမှာ လမ်းများကို ပြုပြင်ဆဲကာလ၌ ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေုးလုပ်ငန်းက ကောက်ခံသော နှုန်းဖြင့်သာ ကောက်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြီးစီးမှ B.O.T နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ လမ်းပြုပြင်ဆဲကာလ၌ ကုမ္ပဏီက လမ်း၊ တံတား အသုံးပြုခွင့် ကောက်ခံနိုင်ရန် ထိုလမ်း၊ တံတား အသုံးပြုခကောက်ခံခွင့် လေလံအောင်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူများက ရှင်းပြသည်။ B.O.T စနစ်ဖြင့် ပြုပြင်ပြီး၍ ကောက်ခံရမည့် လမ်း၊ တံတားကြေးများမှာ တစ်မိုင်လျှင် တစ်တန်အောက်ယာဉ်ငယ်တစ်စီးလျှင် ၄ကျပ် ၁၃ပြား၊ တစ်တန်မှ သုံးတန်အထိယာဉ်တစ်စီးလျှင် ၁၂ကျပ် ၃၉ပြား၊ ငါးတန်အောက်ကားကြီးတစ်စီးလျှင် ၄၉ကျပ် ၃၀ပြား၊ ၂၀တန် ကုန်တင်ယာဉ်ကြီး တစ်စီးလျှင် ၈၂ကျပ် ၅၉ပြား သတ်မှတ်ထားသည်။ အဆိုပါနှုန်းသစ်မှာ ယခင်ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှ ကောက်ခံသော နှုန်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ဆယ်ဆဝန်းကျင် နှုန်းသစ်က ပိုများကြောင်း အဝေးပြေးကုန်တင်ယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်အချို့ကပြောသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လုပ်သားစရိတ်များစွာ သက်သာသော်လည်း ယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်း လမ်းတံတားကြေးများ မြင့်တက်လာပြီးနောက် သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ် ကြီးမြင့်လာခြင်းကို ပြည်ပမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြမည့် လုပ်ငန်းရှင်များက ထိုအချက်အပေါ် အထူးအလေးပေးစဉ်းစားလာကြောင်း ပြောသည်။ ပြုပြင်ပြီးသော လမ်းများတွင် ကုမ္ပဏီများက B.O.T နှုန်းသစ်ဖြင့် ကောက်ခံရာ၌ ယခင်နှုန်းဟောင်းများထက် ပိုကောက်ခံကြသည်ဟု ယာဉ်ပိုင်ရှင်နှင့် ယာဉ်မောင်းများက ပြောကြားကြောင်း သိရသည်။
လောဘ ကိစ္စ ကို ပြောရုံနဲ့ ရမလား?
လမ်းကြေးတွေကပေးရတာများတော့ ကားခတွေလည်းကြီးလာတာပေါ့ဗျာ … ကားခကြီးတော့ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေလည်းကြီးတာပေါ့ … မော်တော်ပီကယ်တွေကလည်း ဘာမဆိုင်ဘဲနဲ့ လမ်းဘေးမှာ ငွေတောင်းနေတယ် … မျက်မြင်မို့ပြောတာပါ …. မလုပ်သင့်တာတွေကိုလုပ်နေကြတယ်လေ …..
အဲလို အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေရဲ့ လမ်းကြေးတွေတော့ ဘယ်လိုတွေကောက်ခံနေလဲမသိဘူး။ ဒါပေမယ့် မြို့ တွင်းလမ်းတွေမှာ ရပ်နားခွန်ဆိုပြီးပေးပေးနေရတာတွေကိုနားမလည်နိုင်ပါဘူး။ ဆိုင်ကယ်ဆို ၂၀၀ ပေး၇တယ်။ ကားဆို ၃၀၀ ။ ဘီးခွန် နဲ့ ရပ်နားခွန် ဘယ်လိုမတူတာလဲမသိ။